ဒူဒူကြီး: "Inert Gas System (၃)"
I.G pressure regulating valve ကို blower ရဲ့ discharge line မှာတတ်ဆင်ထားပြီး၊ ပိုလျှံနေတဲ့ excess gas တွေကို၊ re-circulate လုပ်ရန်၊ scrubber unit သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသလို၊ pressure regulating valve နဲ့ deck seal unit ကြားမှာ၊ vent valve တလုံးကိုလည်း၊ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ vent valve ဟာ၊ normally close position မှာ ရှိနေရမှာဖြစ်ပြီး၊ positive inter-locking arrangement နဲ့ တတ်ဆင် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ cargo tank တွေထဲမှ back flow အနေနဲ့ ပြန်လည် စီးဆင်းလာမယ့် gas တွေဟာ၊ vent valve ကနေအပြင် atmosphere သို့၊ ထွက်သွားမှာဖြစ်သလို၊ pipe line တွေမှာ pressure built up ဆိုတဲ့ over pressurization ဖြစ်ပေါါခဲ့ရင်လည်း၊ vent valve မှတဆင့် လျှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Deck Seal Unit
deck seal unit ကိုတော့၊ back flow အနေနဲ့ စီးဆင်းမသွားစေရန် တားဆီးပေးတဲ့ main safeguard လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ deck seal unit တွေကို (၁) wet type deck seal, (၂) semi-dry type deck seal နဲ့ (၃) dry type deck seal ဆိုပြီး၊ တည်ဆောက်ပုံအရ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ သဘေ်ာတွေမှာတော့ wet type seal ကိုသာအသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Wet type deck seal
(၁) wet type deck seal - chamber ထဲမှာ၊ sealing water အဖြစ်၊ ရေ အနည်းငယ်ဖြည့်သွင်းထားပြီး၊ inert gas အဝင်နဲ့ အထွက် inlet & outlet pipeline (၂) ခုကို၊ chamber ရဲ့ အပေါါဖက်မှာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ inlet pipeline ဟာ၊ sealing water ထဲမှာ မြုတ်နေပြီး၊ sealing water အသွင်းအထုတ်ကိုတော့၊ chamber ရဲ့ အောက်ခြေမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့၊ inlet & outlet pipeline တွေမှတဆင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ inert gas တွေဟာ၊ chamber ရဲ့ အပေါါဖက်မှတဆင့် ဝင်ရောက်လာပြီး၊ sealing water ကိုဖြတ်ကာ၊ chamber ရဲ့ အပေါါဖက် outlet line ကနေ tank အတွင်းသို့ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Demister pad
sealing water မှတဆင့် inert gas မှာပါရှိလာမယ့်၊ ရေစက်၊ အမှုန် အမွားတွေကို demister pad မှ ဖယ်ရှားပေး ပါတယ်။ demister pad တွေကို၊ mist-eliminator လို့လည်းခေါါကြပါတယ်။ အကယ်၍ tank တွေဖက်မှ၊ back pressure ဖြင့် gas တွေပြန်လည်စီးဆင်းလာခဲ့ရင်၊ chamber အတွင်းမှ sealing water ကိုသာအပေါါမှ ဖိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ gas တွေဟာ၊ non-hazardous area ဖက်သို့၊ မရောက်နိုင်တော့သလို၊ inlet pipeline ထဲကို၊ ရေများဟာ၊ level တခုဖြင့်သာစီးဆင်းဝင်ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Semi-dry type deck seal
(၂) semi-dry type deck seal - venture action ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီး၊inert gas ဟာ၊ sealing water ကိုထိတွေ့  ဖြတ်သန်း စရာ မလိုတဲ့အတွက် demister pad ကိုလည်း ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ရန်၊ မလိုအပ်တော့တာ တွေ့ရ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် wet type deck seal နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင် back flow စီးဆင်းနိုင်ဖို့၊ အခွင့်အလမ်းပိုများပါတယ်။
Fig. Dry type deck seal
(၃) dry type deck seal - automatic valve control system ကိုအသုံးပြုပြီး၊ chamber အတွင်းသို့ sealing water လိုအပ်တဲ့ အခါမှသာပို့လွှတ်ပေးပါတယ်။ automation system ဟာအကြောင်းတစုံ တခုကြောင့် failure ဖြစ်ပေါါခဲ့လျှင်၊ back flow စီးဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
inert gas pressure regulating valves တွေနဲ့ re-circulating arrangements တွေကို၊ 'pressure regulating arrangements' တွေအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့၊ (၁) inert gas blower သို့မဟုတ် scrubber unit cooling sea water pump ဟာအကြောင်း တခုခုကြောင့်၊ failure ဖြစ်သွားခဲ့လျှင်၊ back flow အနေနဲ့ ပြန်စီးလာမယ့် gas တွေကိုတားဆီးရန်၊ (၂) cargo tank တွေထဲမှာ simultaneous stripping နဲ့ ballasting operations လုပ်နေစဉ်၊ deck seal unit သို့မဟုတ် mechanical non-return valve ဟာ အကြောင်းတခုခုကြောင့်၊ failure ဖြစ်သွားခဲ့လျှင်၊ tank အတွင်းရှိ gas တွေရဲ့ pressure ဟာ၊ blower မှပေးပို့နေတဲ့ inert gas ရဲ့ pressure ထက်ပိုများလာပြီး၊ back flow အနေနဲ့ပြန်လာမယ့် gas တွေကို တားဆီးနိုင်ရန်နဲ့ (၃) tank တွေထဲကိုပေးပို့မယ့်၊ inert gas ရဲ့ flow ကိုလိုအပ်သလို၊ အတိုးအလျှော့ regulate လုပ်ပြီးထိန်းညှိရန်တို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Inert gas pressure regulating valves and recirculating arrangements
Fig. Weight operated automatic regulating valve, Inert gas system balanced - valve in closed condition
Fig. Weight operated automatic regulating valve - valve in operation condition
အထက်မှာ၊ pneumatically operated pressure regulating valve (၂) လုံးကို၊ main line နဲ့ recirculating line မှာ တတ်ဆင်ထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ re-circulating line မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့၊ regulating valve ကို၊ pressure transmitter မှ တဆင့်၊ controller ကိုသုံးပြီး အဖွင့်အပိတ် opened and closed အားဆောင်ရွက်စေပါတယ်။ main line မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့၊ pressure regulating valve ကိုလည်း၊ pressure transmitter နဲ့ controller တွေကို အသုံးပြုပြီး၊ အဖွင့်အပိတ်ဆောင်ရွက်နိုင်သလို၊ weight operated valve ကိုအသုံးပြုပြီး၊ အဖွင့်အပိတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ transmitter မှရရှိလာတဲ့ feed back signal အပေါါမူတည်ပြီး၊ valve တွေကို လိုအပ်သလို၊ အလိုအလျှောက် အဖွင့်အပိတ်လုပ်စေဖို့၊ electro-hydraulic, fully Hydraulic, electro-pneumatic, fully pneumatic နဲ့ fully electric နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
electro-hydraulic, fully hydraulic, electro-pneumatic နဲ့ fully Ppeumatic နည်းလမ်းတွေမှာ accurate မှတဆင့်၊ valve spindle ကိုအထက်၊ အောက်ရွှေ့လျားစေခြင်းဖြင့်၊ valve တွေကို၊ အလိုအလျှောက်အဖွင့်အပိတ် ပြုလုပ်ပါတယ်။ fully electric နည်းလမ်း မှာတော့ servo motor မှတဆင့်၊ valve spindle ကိုအထက်၊ အောက်ရွှေ့လျားစေပါတယ်။ main deck ကဲ့သို့ hazardous area မှာ pressure regulating valve တွေကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ fully pneumatic controlled regulating valve တွေနဲ့၊ pneumatic transmitter တွေကိုသာတတ်ဆင် အသုံးပြုကြပါတယ်။ transmitter ကို၊ deck isolating valve ရဲ့အထွက် တနည်းအားဖြင့် downstream ဖက်မှာ တတ်ဆင်ထားမှသာ၊ transmitter မှာ အမြဲတမ်း positive pressure ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
back flow အနေနဲ့ cargo tank တွေဖက်မှ၊ gas တွေပြန်စီးလာတဲ့အခါ၊ pressure transmitter မှတဆင့်၊ gas pressure regulator ကိုအကြောင်းကြားပါတယ်။ အဲဒီအခါ gas pressure regulator ကနေ၊ control air ကို အသုံးပြုပြီး၊ re-circulating line မှာရှိတဲ့၊ IG pressure regulating valve လှမ်းဖွင့်ပေးပြီး၊ gas တွေကို scrubber unit အတွင်းသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ တချို့ IG system တွေမှာတော့ vent line မှတဆင့်၊ atmosphere ထဲကို၊ စွန့်ထုတ်စေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ tank တွေထဲကိုစီးဆင်းမယ့်၊ Inert gas ရဲ့ flow ကိုလည်း၊ pressure transmitter ဟာစောင့်ကြည့်နေပြီး၊ regulating valve တွေကို လိုအပ်သလို၊ partially close သို့မဟုတ် partially open အဖွင့်အပိတ်၊ အတိုးအလျှော့လုပ်စေပါတယ်။
Fig. Inert gas system
boiler မီးထိုးရာမှရရှိလာတဲ့ exhaust gas သို့မဟုတ် flue gas ကို၊ inert gas အဖြစ်ပြောင်းကာ၊ အသုံးပြုတဲ့ စနစ်ရဲ့ system operation အပိုင်းကို၊ (၁) Operation Process, (၂) Tank Inerting Process, (၃) De-ballasting Process, (၄) Loading Process, (၅) After Loading Process နဲ့ (၆) Maintenance Process ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
(၁) Operation Process - boiler မှထွက်လာတဲ့၊ flue gas မှာ၊ oxygen content အနေနဲ့ (၅) % ခန့်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တချို့သဘေ်ာတွေမှာ၊ boiler uptake လိုင်းမှာ၊ oxygen analyzer သို့မဟုတ် oxygen content meter တလုံးတတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်၊ အလွယ်တကူသိနိုင်ပေမယ့်၊ တခါတရံ သဘေ်ာတချို့မှာ၊ တတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအခါ boiler ကိုတာဝန်ယူရသူ၊ အင်ဂျင်နီယာဟာ boiler မီးခိုးခေါင်းတိုင်မှ ထွက်လာတဲ့၊ မီးခိုးအရောင်ကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ မီးခိုးအရောင်ဟာ၊ အဖြူဖက်ရောက်နေရင်၊ damper ကို၊ မူလနေရာမှ အနည်းငယ်ပိုပိတ်ခြင်းဖြင့် ချိန်ညှိလေ့ရှိပါတယ်။
system အတွက်လိုအပ်တဲ့၊ power Supply တွေ၊ control air တွေကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့၊ scrubber sea water cooling pump ကို စမောင်းရပါတယ်။ system ထဲမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့၊ valve အတွေရဲ့ အဖွင့် သို့မဟုတ် အပိတ်အနေအထားကို၊ valve spindle မှာ sensor တွေအဖြစ် တတ်ဆင်ထားတဲ့ Limit switch သို့မဟုတ် position transmitter တွေမှတဆင့်၊ CCR မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ပထမဆုံးဖွင့်ရမယ့် valve တွေကတော့၊ vent valve နဲ့ isolating valve ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဝင်အထွက် inlet နဲ့ outlet valve တွေကို၊ ဖွင့်ပြီးမှ blower ကိုစတင်မောင်းနှင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ တဆက်တည်းမှာ recirculating line မှာရှိတဲ့၊ regulator valve ကိုလည်း၊ ဖွင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ oxygen analyzer မှာ၊ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုဟာ (၅) % ခန့် ပြနေပြီဆိုလျှင်၊ vent valve ကိုပိတ်ကာ၊ cargo space ဖက်သို့၊ inert gas ကိုစပေးလို့ရပါပြီ။
inert gas ကို cargo tank တွေအတွင်းသို့၊ လိုအပ်သလိုပေးပို့ပြီး၊ tank တွေရဲ့ atmosphere မှာ၊ လိုချင်တဲ့ အနေအထားရရှိတဲ့အခါ၊ system ကိုရပ်တန့်ရပါတယ်။ ပထမဆုံး vent valve ကိုပြန်ဖွင့်ရပြီး၊ regulating valve ကိုပိတ်ရပါတယ်။ blower ကိုရပ်ကာ၊ fresh water ဖြင့်အချိန်အတန်ကြာ၊ ဆေးကျော wash လုပ်ပြီး drain လုပ်ရပါတယ်။ drain လုပ်ပြီးတဲ့အခါ isolating valve ကိုပြန်ပိတ်ရပါတယ်။ scrubber unit cooling sea water pump ကို အချိန်အတော်ကြာ မောင်းနှင်ပြီးရင်တော့ ရပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Tank Inerting Process - inerting ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို၊ tank အတွင်း atmosphere မှာ၊ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှု (၈) % အောက်မှာ ရှိနေစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် inerting မှ၊ tank တွေအတွင်း၊ ပြင်ပလေထု outside atmosphere pressure ထက်အနည်းငယ်မြင့်တဲ့၊ positive pressure တခုရရှိနေစေဖို့ကို လည်း၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အကယ်၍ tank တွေထဲကို၊ ပြင်ပလေတွေဝင်လာခဲ့ရင်၊ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှု မြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ empty tank တွေထဲကို၊ inerting လုပ်တဲ့အခါ၊ inert gas မှ empty tank တွေအတွင်းရှိ၊ gas တွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ vents တွေအပါအဝင်၊ purge pipes တွေကိုပါ ဖွင့်ထားမှသာ၊ ပြင်ပလေထုထဲကို၊ ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ empty tank တွေထဲက၊ atmosphere မှာ၊ လိုချင်တဲ့ oxygen level ကို ရရင်တော့၊ tank ကိုအလုံပိတ်ကာ၊ atmosphere pressure ထက်အနည်းငယ်မြင့်တဲ့၊ positive pressure တခုဖြင့် ထိမ်းထားရပါတယ်။ positive pressure ရဲ့၊ အမြင့်ဆုံးအမှတ် magnitude ဟာ၊ water gauge ရဲ့ 100mm အမှတ်ရယ်လို့ အကြမ်းအားဖြင့် ပြောနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် '0.01' bars ခန့်လုိ့၊ သတ်မှတ်နိုင်တာမို့၊ atmospheric pressure ထက်၊ '0.99' % ခန့်ပိုပါတယ်။
(၃) De-ballasting Process - ရေနံတင်သဘေ်ာတွေဟာ၊ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ကို အခြေခံတဲ့ crude oil ရေနံစိမ်းကနေ၊ octane spirits တွေဖြစ်တဲ့ petroleum products ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေကို၊ cargo tank တွေထဲမှာ၊ inerting လုပ်ပြီး၊ တနေရာမှ၊ အခြားတနေရာကို ပို့ဆောင်ပေးရုံမက၊ ballast voyages တွေမှာပါ၊ inerting လုပ်ကာ၊ မောင်းနှင်ကြပါတယ်။ ballast voyages ဆိုတာကတော့၊ သဘေ်ာမှာ ကုန်မပါပဲ cargo tank တွေထဲမှာ ရေဖြည့်ပြီး၊ မောင်းနှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သဘေ်ာဟာ၊ ကုန်တင်တော့မယ်ဆိုရင်၊ de-ballasting ဆိုတဲ့၊ cargo tank တွေထဲက၊ ရေတွေကို ထုတ်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ de-ballast လုပ်နေစဉ်၊ inert gas တွေကို၊ tank တွေအတွင်းဖြည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့်၊ ကုန်တင်တဲ့အခါ အဆင်သင့်အနေ အထားဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ပါတယ်။
(၄) Loading Process - သဘေ်ာရဲ့ cargo tank တွေအားလုံးမှာ Inert gas တွေဖြည့်ပြီးသား အဆင်သင့် အနေအထားဖြင့်၊ de-ballasting ကိုအပြင်မှာဆောင်ရွက်ထားတဲ့အတွက်၊ ဆိပ်ကမ်းကပ်ပြီး၊ ကုန်တင်တဲ့အခါ၊ IG plant ကို မောင်းနှင်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ရေနံ နဲ့ ရေနံထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေ tank ထဲကိုဝင်လာတာနဲ့ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဓါတ်ငွေ့တွေကို၊ tank တွေထဲက၊ atmosphere မှာထုတ်လွင့်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ deck isolating valve ကိုပိတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာတော့ သဘေ်ာဟာ၊ အပြင်မှာ de-ballasting ကိုအကုန်အစင်ဆောင်ရွက်ဖို့၊ အချိန်မရပဲ cargo tank တချို့မှာ၊ inert gas ဖြည့်ပြီး၊ tank အချို့မှာတော့ တပိုင်းတစ de-ballasting အနေအထားမျိုးနဲ့၊ ကုန်တင်ဖို့ ဝင်လာတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ de-ballasting လုပ်ရင်း၊ IG plant ကို ဆက်လက်မောင်းနှင်ထားရန် လိုအပ်တဲ့အတွက်၊ deck isolating valve ကိုပဲ၊ သက်ဆိုင်ရာ cargo tank တွေကို၊ inert gas ပေးသွင်းတဲ့ valve တွေကိုသာ လိုအပ်သလိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်ရပါတယ်။
(၅) After Loading Process - ကုန်တင်ပြီးတဲ့အခါ၊ tank တွေအတွင်းမှ၊ inert gas pressure ဟာ၊ 0.01 bar ခန့်ရှိနေရန်လိုအပ်ပါတယ်။ မကြာခဏ စစ်ဆေးပြီး၊ လိုအပ်ပါက IG plant ကိုပြန်မောင်းပြီး၊ oxygen content နဲ့ tank atmosphere pressure ကို၊ positive pressure မှာရှိနေစေဖို့၊ ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
(၆) Maintenance Process - scrubber ဟာ၊ flue gas ကိုအအေးခံပြီး၊ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပါဝင်မှုကို အဓိကလျှော့ချပေးတဲ့၊ unit ဖြစ်သလို၊ sea water နဲ့အမြဲထိတွေ့နေရပြီး၊ corrosion နဲ့ fouling တွေဖြစ်ပေါါကာ၊ အများဆုံးထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်တဲ့၊ unit လည်းဖြစ်ပါတယ်။ nozzles, cooling pipes, floats, sensors, demisters အစရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးပြီး၊ ပြုပြင် ထိမ်းသိမ်းမှုတွေကို၊ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ blower မှာလည်း၊ soot deposit တွေ ကပ်ငြိတတ်ပါတယ်။ blower ကိုမကြာခဏဖွင့်ကာစစ်ဆေးဖို့၊ လိုအပ်သလို၊ မောင်းနှင်လည်ပါတ်နေစဉ်မှာ၊ imbalance condition, abnormal vibration နဲ့ abnormal noise အစရှိတာတွေကို၊ သတိပြုစစ်ဆေးပြီး၊ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှုတွေ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်သင့် ပါတယ်။ deck seal unit မှာလည်း၊ corrosion ဒါမှမဟုတ် blockage ပိတ်ဆို့ခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါါတတ်တဲ့အတွက် ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှုတွေကို၊ ပုံမှန်ဆောင်ရွက် ပေးရန်လိုပါတယ်။
alarm, safety & monitoring system ဟာလည်း၊ အရေးကြီးတဲ့အတွက်၊ အပါတ်စဉ် weekly, လစဉ် monthly အစရှိသလို၊ maintenance schedule ထားပြီး၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် docking ဝင်တိုင်း sea valve တွေကို၊ overhauling လုပ်ခြင်း၊ regulating valve အပါအဝင် PV valve တွေကို၊ calibration လုပ်ခြင်း၊ cargo tank ရဲ့ hatch cover liner packing, hinge pins နဲ့ coamings တွေကိုစစ်ဆေးကာ၊ လိုအပ်ပါက အသစ်လဲလှယ်ခြင်းတွေကို ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Reference and Image credit to : http://seagoing.narod.ru, http://www.tc.gc.ca
Posted by ကိုထွန်း at 22:26
Ak j 28 July 2012 at 00:09
Thanks brother excellent knowledge for I.G System application !
Mary Grace 1 August 2012 at 07:08
Bino 10 August 2012 at 00:26
ွှကျနော်လဲ ၂၀၀၉ တုံးက အဲဒီနှစ်မှာပဲ ရေချတဲ့ High Pool Tanker တစီးမှာ လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။DWT 46,000 မုို့ IG ပါပါတယ်။
Thank for sharing ပါ။